रविले प्रहरीसँगको वयानमा झूट बोलेका हुन् ? - Hamro Abhiyan
रविले प्रहरीसँगको वयानमा झूट बोलेका हुन् ?
चितवन– पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
रविका अतिरिक्त न्यूज २४ टेलिभिजन कार्यक्रममा कार्यरत युवराज कँडेल र नर्स रुकु भनिने अस्मिता कार्की पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
प्रहरीले गत बिहीबार तीनैजनालाई काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएको दोस्रो दिन (शुक्रबार) जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
प्रहरीले उनीहरुमाथि शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा आत्यहत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतले तीनैजनामाथि अनुसन्धान गर्न पहिलोपटक ५ दिन र दोस्रो पटक पनि ५ दिन म्याद थप गरेको छ ।
पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेको चितवन प्रहरीले रवीसहित तीनैजनाको बयान लिइसकेको छ । प्रहरीका अनुसार रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको भिडियो बयान लिइएको छ भने युवराज कँडेलको लिखित बयान लिइएको छ । रवि लामिछानेको पनि लिखित बयान लिइएको छ ।
रविले झूट बोले ?
प्रहरीले शालिकराम प्रकरणमा प्राप्त भिडियो तथा अन्य प्रमाण र पोस्टमार्टम रिपोर्टको प्रारम्भिक विश्लेषण पछि रविसँग बयान लिन शुरु गरेको थियो । रवि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका प्रतिनिधिको रोहबरमा प्रहरीलाई बयान दिन राजी भएका थिए ।
तर, रविले बयानका क्रममा ‘थुप्रै झूटा’ कुरा उल्लेख गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले दाबी गरे ।
अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार रविले यसअघि आफ्नो फेसबूकमा लेखिएका स्टाटसका सम्बन्धमा समेत झूट बोलेका छन् ।
बयानका क्रममा रविलाई ‘शालिकरामको आत्महत्याबारे कसरी थाहा भयो ?’ भनेर सोधिएको थियो । रविले उक्त कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताएका छन् ।
त्यसपछि शालिकरामले ‘आत्महत्या’पूर्व मोबाइलमा रेकर्ड गरेको भिडियोबारे पनि बयानमा प्रश्न सोधियो । तर, रविले भने आफूले उक्त भिडियोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बयान दिएका छन् ।
साथै, पुडासैनीले उनीमाथि लगाएका आरोपका बारेमा समेत प्रहरीले बयानका क्रममा प्रश्न सोधेको थियो । तर, रविले पुडासैनीले लगाएका आरोपबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
पुडासैनीले भिडियोमा बोलेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रहरीले रविसँग बयानका क्रममा प्रश्न सोधेको थियो । जवाफमा रविले ती सबै कुरा गलत र निराधार भएको बताएका छन् ।
तर, खबरहबको सम्पर्कमा आएका अनुसन्धान अधिकारी भने बयानका क्रममा रविले आफ्नै फेसबूक स्टाटसलाई गलत प्रमाणित गर्ने गरी झूट बोलेको बताउँछन् ।
अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेडर्क गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि फेसबूकमा एउटा सन्देश (स्टाटस) लेखेका छन् । जसमा उनले भनेका छन्– सारा आरोप सुन्दा लाग्यो शालिकरामलाई ठूलो भ्रम परेको रहेछ ।
रविले उक्त फेसबूक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘आरोप लगाउने मरेर गएपनि आरोप खेप्ने म जिउँदै छु । मर्नेले लगाएको एउटा मात्रै आरोप प्रमाणित होस्, र हदेसम्मको सजाय होस् । थप जानकारी केही समयमा गराउने छु । सारा आरोप सुन्दा लाग्यो शालिकरामलाई ठूलो भ्रम परेछ ।’
आफैले यौ’न सम्बन्धको भिडियो बनाएर ब्ल्या’कमेलिङ गरेपछि आ’त्म ह’त्या !
जागिरले लु’टि’एको इ’ज्जतः फेसबुकबाट चिनजान, इटहरीबाट बोलाएर काठमाडौंमा ब’’ला…
१६ जनाले क’रणी गर्दा, ३ कक्षामा पढ्ने ८ वर्षकी बालिकाको नि’धन !
७० करोड क’मिसनको प्र’करणका मुख्य योजनाकार पौडेल अमेरीका फ’रार
आलमलाई जे’ल पुर्याउने एसपी भूपेन्द्र खत्री महानिरीक्षक ज्ञवालीको नयाँ…